Digniin Puntland & Somaliland
6 October 2010 SMC Waxan uga digaya in aysan ku cayarin amnigooda somaliland & Puntland, waxaana halkan uga sheegaya in ciidamo u dhashey labadooda gobol ay ku dhex jiraan maamuladaas , ciidamadan ayaa waxa ay si toos ah suport gareyaan al-shabab.
waxaan kula talin laha labadan maamul in aysan mareykanka ku raacin burburintooda waana muhiim shacabka reer Puntland in uu arintaan wax ka ogaado.
sababtoo ah go'aanka ay ka qataan labadan maamul arimaha mareykanka usoo bandhigey oo ah ka hortagida al-shabab ,waxay khatar weyn galineysa gobolka waqooyi bari iyo galbeed somalia, waa muhiim shacabka goboladan in ay diidaan hadii mareykanku uu ka codsado wax burburkooda khatar galin kara.
waxaan idin sheegaya dad badan oo reer somaliland iyo puntland oo maanta tagersan maamuladan ayaa waxa laga yaabe in ay si toos ah uga soo horjeestaan labadan maamul please waxaan idinka codsanaya amnigiina iyo barwaaqada dhulkiina taal haku badalnina burbur iyo in taargid laga dhigto puntland iyo somaliland.
shacabka reer somaliland iyo puntland waa in ay arintan ka hortagaan hadii kale dhibta sitoos ah ayey u sameyneysa mustaqbalka , ciidamadan jooga labadan gobol ee ah ciidan shacab ah hada waxa ay isku badalayaan qolyo u istaaga sidii ay siyaasada mareykanka ula dagalami lahayeen. mareykana ma kala jecla in ay siyasadiisu fashilmato oo waxa uu ku socda waa khamar sida irak iyo afganistan uu ku joogo oo kale.
labadan shacab waa in mareykan uusan ku khamaarin amnigooda waana in aysan ku gubin gacantooda guryahooda.
Qaraxyo isdaba joog ah iyo dagaal 1000 qof ku dhimato yaan dalka la galin mareykan wuu og yahay al-shabab in ay awood xoog leh lee dahay dalka gudihiisa iyo dibadiisaba ,dhib aan noo dhaweyn hanosoo jiidina waana khasab in shacabku uu ka hadlo maslaxadiisa ee maaha in maslaxada Ethopia iyo kenya loo burburiyo Puntland iyo somaliland.
Puntland iyo somaliland cadow toos ah kuma aheyn al-shabab lakiin haka dhiganina cadow toos ah Ethopia ayaa cadow somaliyeed ah ee idinku meesha ha isa soo baraxina hala badbaadiyo dalka ...............
Dr Ali Warsame
yusuf2pac@hotmail.com Members Photos